Usenkingeni owajovwa ephethwe yikhanda | IOL Isolezwe
Usenkingeni owajovwa ephethwe yikhanda
Isolezwe / 18 February 2013, 09:41am / NONHLANHLA MKHABELA
16/02/13 DURBAN: USOLA iklinikhi yaKwa mashu iPhola clinic uNksz Danisile Luthuli eyamjova ngomjovo ongalungile ekade ephethwe yikhanda nokwaholela ukuba abolelwe wumlenze. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
USADIDEKILE ukuthi wajovwa nganhloboni yomjovo owesifazane ongasakwazi ukuhamba kahle emuva kokuba ejovwe emtholampilo iKwaMashu Health Care Centre ekade eye khona enenkinga yekhanda elinkenkethayo.
UNksz Danisile Luthuli waseSiyanda uthe ngoJanuwari 27 waphathwa yikhanda waya emtholampilo lapho ajovwa khona wanikezwa namaphilisi.
Uthe ngakusasa wavuka esinqeni lapho ejove khona kuneqhubu elincane, kubuhlungu wanganaka ezitshela ukuthi yizinhlungu zomjovo ezijwayelekile.
“Ngokuhamba kosuku lakhula leli qhubu kwaqala kwavuvukala nethanga lonke. Ngaphindela emtholampilo bangibuza ukuthi nginesiqiniseko yini sokuthi ngijovwe yibona,” kulandisa uNksz Luthuli.
Uthe wanikezwa omunye umuthi watshelwa ukuthi emuva kwezinsukwana lizosha iqhubu liphele kodwa kunalokho lakhula laze laqhuma ubomvu.
“Kwase kukhona nenyama elengayo umakhelwane wangibizela i-ambulensi ngoba ngingasakwazi nokuzihambela nayo eyazifikela ebusuku. Kwathi uma ngifika emtholampilo ngathethiswa kwathiwa ngenzani ngoba kunakwa abantu abalimele kuphela ebusuku,” kusho uNksz Luthuli.
Uthe ekugcineni omunye unesi wamsiza wamtshela ukuthi iqhubu bese liqala ukuba nobuthi wamubhandisha.
Ekugqigqeni kwakhe emtholampilo eyoshintsha amabhandishi uthe wahlangana nobhekelele izindaba emthola-mpilo uMnuz Hlanganani Bhengu wamchazela udaba lwakhe.
“Wabiza u-matron wamchazela konke wabe esethi (u-matron) kuzoba nomhlangano wabasebenzi kuzanywe ukuthola ukuthi ngubani owenze iphutha ngoba mina ngangingasali-khumbuli igama likanesi owangijova,” kusho uNksz Luthuli.
Esebuyela ngoLwesihlanu eyoshintsha ibhandishi uthe watshelwa ukuthi ikhadi lakhe lilahlekile nokuyinto emxakayo eyokulahleka kwalo futhi lilahleka ngoba esefake isikhalo.
UNkk Patricia Ndlanzi oyi-Operational Manager uthe udaba lukaNksz Luthuli luyaphenywa wathi ikhadi lakhe lizofunwa lize litholakale.
“Udaba lwakhe lusehhovisi likaBhengu luyaphenywa. Ikhadi lizofunwa lize litholakale ngoba ngeke lilahleke nje lingaziwa,” kusho uNkk Ndlanzi.